‘विज्ञानमाथि बिर्को, प्रगति खोक्रो’Prajwal
अध्ययन–अनुसन्धानको सिलसिलामा काठमाडौं आएका फ्रान्सका भौतिकशास्त्री प्रा.डा. जिन मार्क सेइटरले केही समयअघि एक कार्यक्रममा यी अनुभव सुनाए । युनिभर्सिटी अफ रोयन, फ्रान्समा अध्यापन तथा अनुसन्धानमा वर्षौ खर्चिएका उनको प्रस्तुति सरस र रमाइलो थियो। ‘विज्ञान किन चाहिन्छ ?’ राष्ट्रिय युवा परिषद्ले ललितपुर, खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा आयोजना गरेको विज्ञान, सूचना तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको मुख्य सत्रमा अतिथि–वक्ता थिए, सेइटर । सरल...पूरा अंश
चीन प्रवेशको तयारीमा गुगल, प्रतिस्पर्धामा जित्ने बाइडुको दाबीPrajwal
अमेरिकी सर्च इन्जिन गुगल चीन प्रवेश गर्नेे चर्चा चलेसँगै चिनियाँ सर्च इन्जिन बाइडुले आफ्नो बजार अझै सशक्त बनाएर गुगललाई जितिछाड्ने दाबी गरेको छ । चीनको सेन्सरसीप कानुनका कारण सन् २०१०मा चीन छाडेको गुगलले पछिल्लो समय चिनिया कानुनअनुरुप रुपान्तरण गर्दै चीनको बजारमा प्रवेश गर्ने तयारी थालेको हो। चीनको सेन्सरसिप कानुन पालना हुने गरी गुगलले चीन लक्षित नयाँ संस्करण विकास गरिरहेको छ। चिनिया अनलाइन समाचार ‘दी इन्टरसेप्ट’ले गुगलले ड्रागन फ्लाईको अधिनमा रहेर काम गरिरहेको...पूरा अंश
फेसबुकले सिंगापुरमा एक अर्ब डलरमा डाटा सेन्टर बनाउनेPrajwal
विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले एसियामा पहिलोपटक सिंगापुरमा एक अर्ब अमेरिकी डलर लगानीमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्न लागेको बिहीबार घोषणा गरेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरिने यो सेन्टर सन् २०२२ सम्ममा सञ्चालनमा आउनेछ। यो सेन्टरमा फेसबुकको सर्भर रहनुका साथै सूचना प्रविधिका कार्यलाई एकीकृत गरिने फेसबुकका उपाध्यक्ष थोमस फरलङले बताए। करिब एक लाख ७० हजार वर्गफिटमा फैलिने ११ तले यो अत्याधुनिक सेन्टरको तापमान जहिल्यै २५ डिग्री सेल्सीयसको हाराहारीमा रहनेछ। फरलङका...पूरा अंश
सोसल मिडिया प्लाटफर्म फेसबुकले नयाँ भिडियो एप ल्याएको छ । युवापुस्ता माझ टिकटक चर्चित बनिरहेका बेला फेसबुकले लास्सो एप सार्वजनिक गरेको हो । जसलाई टिकटक (म्युजिकल्ली) को प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएको छ ।प्रयोगकर्ताले प्रयोगकर्ताले टिकटकमा जस्तै फिल्टर्स तथा विशेष इफेक्टसहितका छोटो फर्म्याटका भिडियो तयार पार्न र शेयर गर्न सक्ने छन् । फेसबुकका अनुसार नयाँ भिडियो एप लास्सो अहिले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै उपलब्ध रहेको छ । यो एपमा भिडियो इडिटिङ टुल्स रहेको छ जसले...पूरा अंश
उद्योगका विषाक्त पानीले यसरी पाउँछ ‘पुनर्जीवन’Gorkhali
अझै पनि धेरै उद्योगबाट निस्कने प्रदुषित पानी सीधै खोलामा मिसाइन्छ । काठमाडौं र बारा/पर्सा लगायतका जिल्लामा त यो समस्या भयावह छ । तर, हेटौंडामा भने औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्किएको दुषित पानीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिन्छ । जहाँ रसायन मिसिएका पानी प्रशोधन गरेर माछालगायतका जलचर प्राणी बाँच्न सक्ने बनाइन्छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्किएको फोहोर पानीलाई सीधै खोलामा मिसाइँदैन । यहाँ ‘फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र’ सञ्चालनमा छ । जहाँ उद्योगबाट आएका रासायनिक पानी पनि प्रशोधन भएपछि मात्रै...पूरा अंश
‘प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुन सकेन’Roshan
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रविधि प्रयोगशालामा सीमित हुँदा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल समाजशास्त्र संघको आयोजनामा आज राजधानीमा भएको ‘नेपालको कृषि संरचना : समृद्धिका लागि रचनात्मक परिवर्तन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिको उत्पादन मूल्य अरु उत्पादनको तुलनामा सदैव कमजोर रहेकाले उत्पादन लागत घटाउन मूल्य समायोजन महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
फेब्रुअरीमा सामसुङको ग्यालेक्सी एस १०reeshav
सन् २०१९ मा बजारमा ल्याउने आफ्नो नयाँ फ्लागशीप स्मार्टफोनको तयारी सामसुङले गरिरहेको छ । पछिल्ला केही हप्तायता सामसुङ ग्यालेक्सी एस १० का विषयमा लगातार विभिन्न खाले समाचारहरु आइरहेका छन् । सामसुङले आगामी फेब्रुअरी महिनामा हुने मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसको आसपासमा आफ्ना ग्यालेक्सी टेन सिरिजका नयाँ स्मार्टफोन लञ्च गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।
आईफोनमा समस्या: प्रयोगकर्तालाई थाहै नदिई जासुसी गर्न मिल्ने खराबी देखिएको एपलले गर्‍यो स्वीकारRoshan
आईफोन उत्पादक एपलले आफ्नो फेसटाइम नामक कुराकानी गर्ने एपमा प्रयोगकर्ताले कल नउठाएपनि केही समयका लागि जासुसी गर्न मिल्ने समस्या रहेको स्वीकार गरेको छ। केही अवस्थामा आइफोनले प्रयोगकर्ताको जानकारीबिना भिडियो पनि पठाउने गरेको पाइएको छ।
सोनीको आम्दानी दोब्बरले बढ्योPrajwal
विद्युतीय उपकरणको विश्वविख्यात निर्माता सोनी कम्पनीले गत वर्षको तुलनामा छ महिनाको अवधिमा आफ्नो नाफा दोब्बरले वृद्धि भएको घोषणा गरेको छ। गत अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरको अवधिका छ महिनामा कम्पनीको खुद नाफा ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (३९९ अर्ब येन) पुगेको कम्पनीले जनाएको छ। यो नाफा गत वर्षको तुलनामा ८८ प्रतिशतले बढी हो। सञ्चालन नाफा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भई ४३४ अर्ब येन पुगेको छ भने बिक्रीमा सुधार आई करिब ४० खर्ब येन भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ५.५ प्रतिशत बढी हो।
केही समय विश्वकै इन्टरनेट सेवामा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेPrajwal
अघिल्लो केही घण्टा विश्वको इन्टरनेट सेवामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएको छ। केहि समय इन्टरनेटको मेन डोमेन र यो सँग जोडिएका नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डाउन हुने भएकोले इन्टरनेट युजर्समा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्ययमले जानकारी दिएका छन्। आवश्यक मर्मतको कार्य गर्नुपर्ने भएकोले इन्टरनेट सेवा ४८ घण्टा सम्म डिस्टर्ब रहने सक्ने बताइएको छ। द इन्टरनेट कर्पोेरेशन अफ असाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स (आईसिएएनएन) ले क्रिप्टोग्राफिक किजमा बदलाव गर्दै मर्मत...पूरा अंश
रसायनशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जनालाईPrajwal
यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ३ जना वैज्ञानिकलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको छ। रोयल स्वीडिस एकेडेमी अफ साइन्सले वैज्ञानिकहरु फ्रान्सिस एच आरनोल्ड, जर्ज पी स्मीथ र सर ग्रेगोरी विन्टरलाई रसायनशास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरेको हो। औषधी उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने नयाँ प्रोटिनहरुको विकासमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुलाई यस वर्षको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। फ्रान्सिसले एन्जाइमबारे अनुसन्धान गरेका थिए। उनले 'डिरेक्टिड इभ्युलुशन' को प्रविधि प्रयोग गर्दै...पूरा अंश
नेपाल प्रहरीलाई एसियाकै प्रतिष्ठित आईटी अवार्डreeshav
नेपाल प्रहरीले एसियाकै प्रतिष्ठित सूचना प्रविधि सम्बन्धी अवार्ड पाएको छ । जापानको एसियन ओसिनियन कम्प्यूटिङ इन्डट्री अर्गनाइजेसनले नेपाल प्रहरीलाई सन् २०१८ को ‘डिजिटल गभर्मेन्ट अवार्ड’ दिएको हो । विभिन्न ४ विधामा प्रदान गरिने अवार्ड मध्ये एक विधाको अवार्ड पाएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । टोकियोमा २२ कात्तिकमा कम्प्यूटर एसोसिएन नेपाल महासंघका सदस्य डा. अभिजित गुप्ताले एएसओसीआईओका अध्यक्ष डेबिड वाङबाट ग्रहण गरेको अवार्ड बुधबार आईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई...पूरा अंश
बदलियो किलोग्रामको परिभाषा, हाम्रो जीवनमा के असर गर्छ ?Ankit
वैज्ञानिकहरुले किलोग्राम (केजी)को परिभाषा परिवर्तन गरेका छन् । नयाँ परिभाषालाई ५० भन्दा बढी देशले सर्वसम्मतीले अनुमति दिइसकेका छन् । पहिले यसलाई प्लाटिनमबाट बनेको एक सिलको वजनसँग परिभाषित गरिन्थ्यो जसलाई ‘ली ग्रान्ड के’ भनिन्छ । हालै फ्रान्सको वर्साइल्समा बारे एक ठूलो ‘वेट एन्ड मेजर्स’ सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा धेरै वैज्ञानिकहरु सहभागी थिए । सम्मेलनमा किलोग्रामको परिभाषा बदल्ने कि नबदल्ने भन्नेबारेमा भोटिङ भयो । किलोग्रामको पहिलेको परिभाषा बदल्ने पक्षमा भोटिङको...पूरा अंश
कति बेला काम लाग्छ प्रहरीको हटलाइन एसएमएसAnusha
आपत्‌विपद्‌मा पर्दा सहयोग माग्न प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्दा व्यस्त हुनाले तपाईँले तनाव बेहोर्नुपरेको त छैन? कि नबोलीकनै आफू आपत्‌मा परेको प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने अवस्था आइपरेको छ? यस्ता समस्यालाई ध्यान दिँदै प्रहरीले १०० मै निःशुल्क एसएमएस सन्देश समेत पठाउने सकिने सेवा शुरु गरेको छ। विज्ञहरूले भने त्यसको प्रभावकारिताका लागि आपत् पर्दा पठाइने त्यस्ता एसएमएसको भाषाको ढाँचा निश्चित तथा छरितो बनाउनुपर्ने औँल्याएका छन्।
ड्रोन क्यामेरा देख्दा भागाभाग….reeshav
मोरङको कटहरी गाउँपालिकालाई खुला दिशामुक्त बनाउने अभियानका क्रममा ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरी निगरानी गरिएको छ । खुला स्थानमा शौच गर्नेलाई सार्वजनिक स्थानमा ल्याएर सम्मान गर्ने अभियान पनि सञ्चालन गरेको गाउपालिकाले शुक्रवार बिहान ड्रोनको प्रयोग गरी निगरानी गरेको हो । नेपाल प्रहरीको सहयोगमा प्रयोग गरिएको ड्रोन क्यामेरा देखिएपछि बिहानै सार्वजनिक स्थानमा शौच गर्न पुगेकाहरुको भागाभाग भएको थियो ।
यात्रु बोक्ने मोटरसाइकल कारवाहीमाreeshav
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियमविपरीत यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारवाही शुरु गरेको छ । टुटल, पठाओ लगायतका मोबाइल एप्स सञ्चालन गरी यात्रु बोक्ने गरेका विशेष सूचनाका आधारमा चारवटा मोटरसाइकललाई कारवाही गरिएको हो ।
इरानी विदेशमन्त्रीको राजीनामा: किन गरे इन्स्टाग्राममार्फत् घोषणा
टि्वटरका सिइओले भारतीय संसदलाई टेरेनन्, उपाध्यक्षलाई पठाउने